EditShare သည် Adobe Premiere Pro Enterprise Post-Production လုပ်ငန်းအသွားအလာများအတွက်ဖြေရှင်းချက်များအစုံအကြောင်းကြေငြာခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » EditShare ကို Adobe Premiere Pro ကိုလုပ်ငန်း Post ကို-ထုတ်လုပ်မှု Workflows များအတွက်ဖြေရှင်းနည်း၏ Suite ကြေညာ
EditShare ကို Adobe Premiere Pro ကိုလုပ်ငန်း Post ကို-ထုတ်လုပ်မှု Workflows များအတွက်ဖြေရှင်းနည်း၏ Suite ကြေညာ
ဘော်စတွန်, MA - စက်တင်ဘာလ 9, 2019 - EditShare®, ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု, လုံခြုံရေးနှင့်မီဒီယာဖန်တီးမှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အသိဉာဏ်သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်အထူးပြုတဲ့နည်းပညာကိုခေါင်းဆောင် Helmut FX, IO, CO (ဠာ), နှင့်ဟောင်ကောင် (နေရာထိုင်ခင်းထိန်းသိမ်းရေး) တခုအဖြစ်မည်, ကျယ်ပြန့်စီမံကိန်းကိုအုပ်ချုပ်ရေးကို enable ဖို့ဒီဇိုင်းဖြေရှင်းနည်းများ, back- Adobe®Premiere® Pro ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း post-ထုတ်လုပ်မှု Workflows များအတွက်လယ်ယာထိန်းချုပ်မှုရုံးစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်ဆပ်။ Premiere Pro ကိုဗီဒီယိုတည်းဖြတ်အတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြေရှင်းချက်၏ Helmut မိသားစုစက်တင်ဘာလ 2019th ကနေစက်တင်ဘာလ 13th (17.A7 ရပ်) မှတဆင့် IBC35 မှာသရုပ်ပြလိမ့်မည်။
'' Streams အင်ဂျင် '' ဟုခေါ်တွင် configuration ကိုလုပ်ငန်းအသွားအလာဖို့အလွန်အမင်းအကျိုးရှိစွာ, အသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေ node ကို-based ချဉ်းကပ်နည်းကိုသုံးပြီး, Helmut ထိုကဲ့သို့သော encoding ကအဖြစ်အရေးပါကျော-ရုံးလုပ်ငန်းဆောင်တာနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်, ရွှေ့ပြောင်း, Premiere များအတွက်လယ်ယာထိန်းချုပ်မှုနှင့်အခြားနေရာထိုင်ခင်းထိန်းသိမ်းရေးနည်းပညာဆိုင်ရာတာဝန်များကိုဆပ်အခြေစိုက် Post-ထုတ်လုပ်မှု workgroups Pro ။ ချောမွေ့စွာနှင့်အတူပေါင်းစည်း EditShare စီးဆင်းမှုမီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု, အပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် Helmut နှင့်စီးဆင်းမှုမြောက်ဘက်-ဘောင်း API ကိုဗိသုကာခြုံငုံဘဏ်ဍာပိုကောင်းအောင်, ထိထိရောက်ရောက် 'အောက်က-The-ပါးပျဉ်း' 'နည်းပညာဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်အခွင့်အဖန်တီးမှု Workflows အဖြစ်ရှုပ်ထွေးပြီးမလိုအပ်တဲ့နှစ်ဦးစလုံးအလိုအလျောက်မှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများထားရှိအားပေး, စိတ်ကြိုက်၏မြင့်မားသောဒီဂရီကို enable ။
"အသစ်ကအကြောင်းအရာ-ပေးပို့ options များ, ကြော်ငြာများအတွက်ဝယ်လိုအား, snackable အကြောင်းအရာနှင့်အရည်အသွေးမြင့်ပရိုဂရမ်းမင်းမြင့်တက်ခဲ့ပြီး, အလှည့်အတွက်သိသိသာသာ Post-ထုတ်လုပ်မှုဈေးကွက်ကိုဖြတ်ပြီးအကြောင်းအရာဖန်တီးမှုအခွင့်အလမ်းများကိုချဲ့ထွင်ထားပါတယ်၏တိုးပွားလာမှုနှင့်အတူ။ "သို့သော်အခွင့်အလမ်းများအဖြစ်ကြီးထွား, ဒါကြောင့်ပိုမြန်အရင်ကထက်, သိသိသာသာပိုပြီးဖန်တီးကယ်နှုတ်သောအရည်အသွေးမြင့်မားသောအကြောင်းအရာများကိုထိုအကဗီဒီယိုပညာရှင်များအပေါ်ဖိအားပြုပါ Tracy Geist, စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအရာရှိချုပ် comments, EditShare. အတူပေါင်းစပ် "Helmut, EditShare စီးဆင်းမှုသည်ကို Adobe လုပ်ငန်းအသွားအလာကိုဖြတ်ပြီးတိုင်းခြေလှမ်းမှာပိုမိုကောင်းမွန်ရေးနှင့်အတူနောက်ကျောဇာတ်လမ်းပြောပြအပေါ်အာရုံစူးစိုက်တတ်၏။ ရှုပ်ထွေးဖျက်သိမ်းရေးနှင့်ပူးပေါင်းမြှခွငျးအားဖွငျ့, EditShare post ကိုအဆောက်အဦ ပို. ပင်အရည်အသွေးမြင့်စီမံကိန်းများဖန်တီးကယ်နှုတ်တော်မူရန်အဘို့အတာရှည်လေယာဉ်ပြေးလမ်းကိုပေးတော်မူ၏။ "
IBC2019 မှာ Display ကိုပေါ် Expanded Helmut ကုန်ပစ္စည်းမိသားစု:
●အဆိုပါ HelmutFX software ကိုဖြေရှင်းချက်ထုတ်လုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု simplifying နှင့်အလုပ်လုပ်ဖြစ်စဉ်များ streamlining, Premiere Pro နဲ့သိုလှောင်မှုပတ်ဝန်းကျင်မှာဆက်သွယ်။ အယ်ဒီတာများပိုရှိသည်ဒါထိန်းချုပ်မှုနှင့်အလိုအလျောက်တစ်အလွှာတစ်ခုကိုထည့်ပေါင်းခြင်း, HelmutFX (စသည်တို့ကိုစားသုံးမိ, archive ကို, backup လုပ်ထား, Mam, Pam) Third-party system များနှင့်ဆက်သွယ်, အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းများကိုတစ်ကျယ်ပြန့်စီမံခန့်ခွဲရှုပ်ထွေးမှုကိုလျှော့ချခြင်းနှင့် Workflows တိုးတက်စေရန် ထုတ်လုပ်မှု၏ဖန်တီးမှုရှုထောင့်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရန်အချိန်။
Adobe ကမီဒီယာကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာများအတွက်တီထွင်●တစ်ခုကတီထွင်ဆန်းသစ်အသစ်သောတင်ဆက်မှုလုပ်ငန်းအသွားအလာ, HelmutIO, ကွန်ယက်ပေါ်ရှိအရင်းအမြစ်များ rendering ပျင်းရိခြင်းနှင့်အသုံးမပြုတဲ့ CPU များသို့မဟုတ်ဆာဗာများဖော်ထုတ်အလိုအလျောက်Effects®စီမံကိန်းများကိုပြီးနောက် Pro နဲ့ Adobe Premiere ကနေကလစ်များနှင့်ပာတင်ပို့ခြင်းနှင့်တာဝန်ပေးဖို့, တန်ဖိုးရှိသောစနစ်အချိန်အထိလွတ်မြောက်စေဖို့စီမံခန့်ခွဲ တန်ဖိုးရှိရှိဖန်တီးမှုအလုပ်အတွက်။
ဖိုင်တွဲအဆောက်အဦများ, metadata ကို, ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်တစ်ဦးဒေတာဘေ့စ၌သူတို့ကိုရရှိနိုင်မချခင်ပာအပါအဝင်●ဠာအညွှန်းကိန်းစီမံကိန်းများ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ဒီဒေတာကိုအလွယ်တကူအကြောင်းအရာဖော်ထုတ်နေရာချထားရန်ဖန်တီးမှုများအတွက်တစ်ဦးအမြင်အာရုံအလိုလိုသိဒက်ရှ်ဘုတ်တွင်ရရှိနိုင်၏။ ဤသည်အဖော်ဒေတာဘေ့စ Premiere Pro ကိုဖွင့်လှစ်ရန်လိုအပ်နေသည်အသုံးပြုသူများမပါဘဲ Premiere Pro ကိုစီမံကိန်းများနှင့် Third-party စနစ်များအကြားအပြည့်အဝထပ်တူနိုင်ပါတယ်။
●နေရာထိုင်ခင်းထိန်းသိမ်းရေးတိုက်ရိုက်ဠာ, delete ဖို့ကျယ်ပြန့် metadata ကိုအသုံးချဖို့, အပြောင်းအရွေ့, archive ကိုချိတ်ဆက်ထားပြီးနှင့်စီမံကိန်းများနှင့်စီမံကိန်း-related ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစီမံခန့်ခွဲတာဖြစ်ပါတယ်။ Tasks ကိုကိုယ်တိုင်ဖျော်ဖြေသို့မဟုတ်တိကျတဲ့အချိန်က run ဖို့ ထား. automated နိုင်ပါသည်။ HelmutHK လည်း HelmutIO ရဲ့ဖြတ်ပြီးသည်ဤတာဝန်များကိုနှစ်ဦးစလုံးထုတ်ကုန်တွဲဖက်များတွင်အသုံးပြုလျက်ရှိသည်ဘယ်မှာအခြေအနေတွေမှာ node များဆပ်ဖြန့်ဝေနိုင်ပါတယ်။
IBC2019 မှာအတှေ့အကွုံ Helmut
IBC တက်ရောက် (ကသရုပ်ပြစာအုပ်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်www.editshare.com/ibc-2019) အရေးယူအတွက် Helmut ကြည့်ဖို့။ တစ်ဦးတည်း-on-one သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်အချိန်စာရင်းစေရန်, အဲလက်စ် Molina ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်, [အီးမေးလျ protected].
IBC မှာက Adobe
Adobe က Creative Cloud® Post-ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအသွားအလာအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှခြေလှမ်းမှာထိရောက်မှုနှင့်မြန်နှုန်းတတ်၏။ ဇာတိ file ကိုထောက်ခံကြောင်းနှင့်မြန်တင်ဆက်မှု, Workflows, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသံရောစပ်, ရွေ့လျားမှုဂရပ်ဖစ်တင်းပလိတ်များနှင့် Adobe က Sensei ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဒီဇိုင်းများအတွက်ကြွယ်ဝသောစီမံကိန်းကိုပုံစံကနေ, Adobe ကရဲ့ပေါင်းစည်းဗီဒီယိုတည်းဖြတ် tools တွေကိုကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအကြီးအဇာတ်လမ်းပြောပြသို့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုဖွင့်ကူညီပေးသည်။ Adobe ကထုတ်လွှင့်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ကြွယ်ဝသောနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ထုတ်လုပ်မှုဂေဟစနစ်ပေး 300 နည်းပညာမိတ်ဖက်ကျော်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ Adobe ကအားဖြင့်ရပ်တန့် Adobe Premiere Pro ကိုကြည့်ဖို့ (ခန်းမ 7-7.B35) ရပ်, အကျိုးသက်ရောက်မှုပြီးနောက်နှင့် Adobe ကAudition®အရေးယူမှုနှင့်ဖောက်သည်များပိုမိုမြန်ဆန်ကို Adobe Creative Cloud အတူ finish ကိုလိုင်းရပုံကိုထိပ်ဆုံးနားထောင်ကြလော့။
© 2019 EditShare LLC ။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။ EditShare®တစ်ဦးမှတ်ပုံတင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပါသည် EditShare.
(p) + 1 617 834 9600
Ooyala Flex မီဒီယာပလက်ဖောင်း၏နောက်ဆုံးသတင်းများသည် Cloud ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ဖြန့်ဝေခြင်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်သည် - စက်တင်ဘာလ 28, 2020
“ The Gadget Show” သည် Channel5သို့ ATEM Mini Pro နှင့်အတူပြန်သွားသည် - စက်တင်ဘာလ 24, 2020
IPV က MAM ကိုကြေငြာသည်။ ရှင်းလင်းသောလစဉ်လုပ်ငန်းအသွားအလာဝက်ဘ်ဆိုက်များ - စက်တင်ဘာလ 18, 2020
Adobe က Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ဘော့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ တည်းဖြတ်ခြင်း EditShare ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor helmut SJGolden - SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows စာတန်းထိုး, ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana, မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး, IBC ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို TVU ကွန်ယက် က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-09-09
ယခင်: IBC 2019 မှာ Lynx Technik ပွဲဦးထွက်မယ့် HDR Evie +
နောက်တစ်ခု: Aspen မီဒီယာ Keep-ဒါဟာ-ရိုးရှင်းသော Dante အသံ UNiKA မှစ. Presents